Ọnụahịa ụlọ ọrụ eletriki Smart Eye Massager Hot Compress Blue-eze Music nwere ọgụgụ isi n'okpuru Massager nke nwere Nkpuchi Nlekọta Anya Okpomọkụ.
Isi nsogbu anọ dị na anya: anya astringent na -enweghị ume, ike ọgwụgwụ anya, okirikiri gbara ọchịchịrị, akpa anya. Maka oke anya kwa ụbọchị, anya gị na -agwụ ike:
Ngosipụta atụmatụ mmepụta: jiri teknụzụ kọwaa mmụọ nka nka, jiri mma kọwaa aesthetics ndụ. Ụlọ ọrụ mmepụta ihe, ụlọ ọrụ nyocha dị mma, ụlọ nkwakọba ihe ngwaahịa.
2. Ịhịa aka n'ahụ nke nwere ọgụgụ isi: ka “ọhụhụ” gị nwee ọmịiko m.
3.Waa nke ọma na ịhịa aka n'ahụ na nlekọta anya: jiri amamihe belata ike ọgwụgwụ, lekọta anya gị. Ọrụ ndị bụ isi, yana njiri mara: nlekọta anya ịhịa aka n'ahụ, egwu mara mma, mgbagharị ụda, mkpọtụ ugboro ugboro, mpịkọ ọkụ na-ekpo ọkụ mgbe niile, ụdị ụdị 5, ntachi obi na-adịte aka, mpịachi mpịakọta ogo 180, ume iku ume akpụkpọ.
4.Gịnị kpatara ịhịa aka n'ahụ ji dị mkpa, n'ihi na anya anya bụ ihe dị mkpa nlebara anya mmadụ. Ọtụtụ nsogbu anya, dị ka: anya kpọrọ nkụ, okirikiri gbara ọchịchịrị, asthenopia, ụkwụ uko, ọhụụ na -adịghị ahụkebe, akpa anya siri ike, photophobia, ohu ihuenyo.
5.Ị so n'òtù ndị a? Ị so n'òtù na -esonụ? Onye na -arụ ọrụ n'ọfịs, nnọkọ oriri na ọ mobileụ ,ụ, na -amụ anya abalị, ezinụlọ myopia.
6.Simulation na -agwakọta, isi ihe acupuncture gburugburu anya: aka aka na -ete acupoints anya, belata ahụ erughị ala.
7.Swipe iji kpuchido anya ngwa ngwa: anya kpọrọ nkụ na anya astringent, otu pịa na -ewepụ ike ọgwụgwụ. Ndị ntorobịa nke oge a na -emejọ anya ha ruo 8H+ kwa ụbọchị, debe anya gị na ntị ihuenyo na -enye ume ọhụrụ. Onye na-ahụ maka anya nwere ọgụgụ isi nwere ike KO nọrọ abalị-swipe oriri, ihuenyo kọmputa --- nnọkọ oge ọrụ, ihuenyo ekwentị --- gbadaa ala, onye nwe pusi abalị-nọrọ abalị.
8.3S ~ okpomọkụ oge niile, ọkụ ọkụ, mpikota ọkụ iji mee ka anya panda na -enwu gbaa. Nchekwa nwere ihe na-emepụta ọkụ ọkụ graphene ọhụrụ, dị ka akwa nhicha, na-ekpo ọkụ nke ukwuu iji kpochapụ ike ọgwụgwụ anya.
9. Ịhịa aka n'ahụ okpukpu abụọ: ọnọdụ ịma jijiji ọhụrụ: mkpọtụ ugboro ugboro nke injin abụọ na -akwagharị, na -ama jijiji mgbe niile isi 9 acupuncture gburugburu anya, dabara maka ụdị ihu dị iche iche.
Nchedo 24H dị arọ na enweghị ntụpọ, ọ dị mfe iburu ndụ batrị ogologo: 180 ogo mpịachi mpịachi, imeghari ụdị ihu dị iche iche, bụ obere masseur na -ebugharị ebugharị, batrị lithium na -ahụ maka gburugburu ebe obibi na -akwụ ụgwọ ngwa ngwa, ndụ batrị ruo awa 2.
11.Fabric kwalite, akpụkpọ anụ protein ọhụrụ, mmetụ dị nro dị ka nwa, naanị mgbe atụnyere ihe dị mma. Tụlee ihe flannel nkịtị, nke nwere ike ibute allergies ọsụsọ adịghị mma na enweghị ikuku; Akpụkpọ anụ protein na-adị nro ma nwee ọmarịcha akpụkpọ ahụ, dị mfe ma na-eku ume, dabara adaba na-enweghị kpuchie ọsụsọ.
12. Ụdị nchedo anya ise: teknụzụ siri ike na -emebi usoro, ịhịa aka n'ahụ ugboro ugboro, chọta agba anya: ọnọdụ zuru oke: nchedo anya nwere ọgụgụ isi na -azọpụta nchekasị na mbọ (nrụgide ikuku + mkpọtụ + mpikota ọkụ + egwu); ọnọdụ doro anya: meziwanye anya anya ma mee ka anya na -enwu gbaa (nrụgide ikuku + ịma jijiji + mpịakọta ọkụ + egwu); ọnọdụ ihi ụra: na -adị jụụ tupu ị lakpuo ụra, na -ehi ụra ruo mgbe chi bọrọ (mgbali ikuku); mode ike: megharia anya anya ma kpalie ume (egwu + egwu); ụdị nkasi obi: jụ ike ọgwụgwụ na izu ike (mpikota ọkụ + egwu).
13.Sective, ezi na anaghị akpaghasị: miri na ịgbachi nkịtị na -eme ka uche dajụọ. Nchegbu, nchekasị na mgbakasị ahụ, nọrọ abalị niile wee kpachie ihuenyo ahụ, yiri ya. Agba anya na -apụta ọzọ, a hụghị okirikiri gbara ọchịchịrị ọzọ. Enwere mkpọtụ ọkụ mgbe ịmalite ịbubata, tinye ụdị ịhịa aka n'ahụ.
14. Na ntị onye na -echebe anya na -enye ume ọhụrụ: ọtụtụ ọrụ iji mejuo gị oge ọ bụla, ebe ọ bụla. Egwu Bluetooth, ntachi obi na -akwụ ụgwọ, nchekwa mpịachi, ọmarịcha ọrụ aka, kpo oku graphene.
15.Smart egwu: egwu etinyere n'ime ya, egwu ogo 360 gbara ya gburugburu, zuru ike. Batrị lithium arụnyere n'ime ya: chajuru otu ugboro, ejiri ya nkeji iri na ise n'otu oge, nwere ike ịdịru ụbọchị asatọ. Ọkwa ọkwa atọ nke nhazigharị okpomọkụ: obere okpomọkụ, obere okpomọkụ, oke okpomọkụ, gia atọ, họrọ dịka ịchọrọ. Ikuku na-eku ume nke anụ ahụ: mmetụ dị nro, dabara adaba, yana ịdị mfe nhicha!
16.Smart kpo oku na -ekpo ọkụ: kpoo ọkụ n'otu oge, kwalite mgbasa gburugburu anya, mee ka anya mara mma ma kpochapụ okirikiri anya.
Aha: Onye nlekọta anya,
Ihe: ABS nchedo gburugburu ebe obibi ihe akpụkpọ anụ protein
Ndepụta: Akwụkwọ ntuziaka/onye ọbịa/eriri ọkụ
Nke gara aga: AI Smart Eye Massage Bluetooth Version Voice Control Music Eye Massager nwere igwe ịhịa aka na -ahụ anya
Massage Anya Sonic
N'okpuru ịhịa aka n'ahụ
Ọgụgụ isi anya ịhịa aka Instrument Graphene Fev ...
Ịhịa aka n'ahụ Smart Smart Massage Bluetooth Version Voice Co ...
Robot Office Kitchen Recharge na -akpaghị aka, Oche ịhịa aka n'ahụ Zero, Sweep Robot Vacuum Cleaner, 2021 kacha mma nhicha robot, Robot Wet Na Akọrọ, Mgbaji nke ọgụgụ isi Alexa,